Indawo yeholide yaseMt Maunganui Beach - I-Airbnb
Indawo yeholide yaseMt Maunganui Beach
Tauranga, Bay Of Plenty, i-New Zealand
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Tamati & Tessa
Leli fulethi lamaholide olwandle lithokomele futhi liphumule. Kuyibanga lokuhamba ngezinyawo ukuya olwandle kanye nenxanxathela yezitolo. Ifulethi linekhishi eligcwele, amagumbi amabili okulala, nendawo engaphandle evulekile. Kuyindawo enhle yabantu abangashadile, imibhangqwana noma imindeni efuna iholidi edolobheni elihle kakhulu emhlabeni!
Leli yifulethi elizimele, eliziphekele ngokugcwele elinendawo engaphandle, elixhumene nendlu yethu. Ikhishi linefriji, isiqandisi, nohhavini, kukhona nomshini wokuwasha nolayini wokuwasha uma ukudinga. Kukhona i-TV yesikrini esiyisicaba, i-Google Chromecast nesidlali seDVD, (anama-DVD atholakalayo ongawaboleka uma uthanda). Uma ungathanda ukuhlala nezivakashi ezingaphezu kwezi-5, sicela ubuze.
Igumbi lokulala elikhulu linombhede wendlovukazi kanti ikamelo lesibili linombhede olala abantu ababili ngezansi nombhede owodwa phezulu. Umbhede ongashadile ophezulu cishe ulungele kuphela izingane noma abantu abadala abancane.
4.58 out of 5 stars from 406 reviews
4.58 · 406 okushiwo abanye
Le ndawo inobungane, yokuhlala, futhi iseduze nezinsiza eziningi:
500m ukuya olwandle (5min ukuhamba)
I-1km ukuya enxanxatheleni yezitolo i-Bayfair (10min ukuhamba)
350m ukuya esitobhini sebhasi
350m ukuya esitolo/ezokuthenga
I-1km ukuya e-Baywave pool complex ene-wave pool, ama-hydroslides kanye nejimu
2km ukuya e-ASB Barpark Arena
2.4km ukuya e-Omanu Golf Club
Ibungazwe ngu-Tamati & Tessa
Siyajabula ukutholakala nganoma imiphi imibuzo, futhi sijabulela ukuhlonipha ubumfihlo bakho ngenkathi ulapha.